Madaxwayneyaashii Hore Ee Deegaanka Oo Kuhawlan Waxsoosaarka Beeraha Ee Galbeedka Shabeele - Cakaara News
Madaxwayneyaashii Hore Ee Deegaanka Oo Kuhawlan Waxsoosaarka Beeraha Ee Galbeedka Shabeele
Godey(CN) Arbaco, 21ka October 2015, Dadaalada tirada badan ee ay xukuumada DDSI ugu jirto inay kuhorumariso shacabka deegaanka kuna hirgalinayso qorshaha koboca iyo isbadalka dhaqaalaha ee wareega 2,aad ayaa waxaa kamid ah inay xooga saarayso dhanka tabaca beeraha.
Hadaba si taa loo hirgaliyo ayaa waxay xukuumadu dhawaan qaybisay 200 oo cagafcagaf taas oo aasaas iyo wacyigain unoqonaysa bulshada deegaanka si ay nimcada dhulka ugu foorarsadaan waxna ugalasoo baxaan iyagoon waxba kaga bixin oo dhulka, abuurka xulka ah, biyo iyo cagafcagafyadiiba lasiiyay.
Sidaadarteed, madaxwayneyaashii hore ee deegaanka oo ay kamid yihiin: mudane khadar macalin cali, mudane cabdirashiid duulane, ugaas maxamuud muxumed qani, mudane cali cabdi ciise iyo mudane diiriye cumar weheliyaana odoyaasha, mas'uuliyiin deegaanka horay usoo maray oo kamid ah bulshada ay xukuumadu ugu deeqday dhulka, abuurka xulka ah, biyaha iyo cagafcagaftaba ayaa hawlo adag oo dhinaca waxsoosaarka beeraha ah kawada galbeedka gobolka shabeele iyagoo tabaca xaga ugu horeeya kaga jira.
Mas'uuliyiintan iskudhafka ah kuma hawlana oo kaliya waxbeerashada lafahooda sida uu noo sheegay wasiir kuxigeenka xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga mudane Guleed Cali ee waxaa udheer inay wacyigalin iyo abaabulka bulshada oo dhinaca beerashada ah ay si xoogan uga wadaan gobolka oo dhan iyagoo shirar wacyigalin ah meel walba ugu qabanaya bulshawaynta gobolka.
Mana aha oo kaliya mas'uuliyiintan iskudhafka ah cida hawlahan kufoogan ee waxaa hor kacaya wasiir kuxigeenka iyo 30 xirfadlayaasha beeraha ah oo goob kasta iyo meel kasta oo gobolka kamid ah wacyigalin iyo tababaraba kawada.
Gabagabadii ayaa waxaa lafilayaa in sanadkan 2008TI uu waxsoosaarku beeruhu noqon doono mid kulaban laabma kii sanadkii hore.